Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » China Travel News » Ny fizahan-tany any Shina dia hanangona $ 195 miliara dolara amin'ny tapany voalohan'ny taona 2021
Ny fanjifana fizahan-tany any Shina dia mahazo fanarenana haingana ary hahita fisondrotana fanjifana amin'ny telovolana fahatelo amin'ity taona ity, indrindra mandritra ny fetin'ny fetim-pirenena mandritra ny herinandro.
Fitsangatsanganana an-trano maherin'ny 1.7 miliara any Sina no antenaina hatao amin'ny H1 2021
Tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny 2021, nanao dia an-trano 697 tapitrisa ny sinoa
Mandritra ny Andron'ny Asa dia fialan-tsasatra fitsangatsanganana an-trano no hihoarana na mihoatra ny haavo talohan'ny COVID-19 aza
China Academy Academy (CTA) dia maminavina fa ny vola miditra amin'ny fizahan-tany amin'ny firenena dia hitombo 102 isan-jato isan-taona ary hahatratra 1.28 trillion yuan (eo amin'ny $ 195 miliara amerikana) amin'ny tapany voalohan'ny taona 2021.
Fitsangatsanganana an-trano maherin'ny 1.7 miliara ao Shina antenaina hatao ao amin'ny H1 2021, hatramin'ny 85 isan-jato isan-taona, nambaran'ny Akademia tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany.
Mandritra ny fialantsasatra ho an'ny Andron'ny Asa ho avy izao manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 5 Mey, ny fitsangatsanganan'ny mpizahatany ao an-toerana dia ho tafarina na hihoatra ny haavo talohan'ny COVID-19 aza, hoy i Dai Bin, talen'ny CTA.
Mandritra izany fotoana izany, hoy ny fanadihadiana nataon'ny Akademia, 83 isan-jaton'ny valinteny no nilaza fa vonona ny hivezivezy amin'ny telovolana faharoa 2021, miakatra 1.02 isa isan-jato ary 4.93 isan-jato raha ampitahaina amin'ny Q1 an'ny 2021 sy Q2 an'ny 2020.
Tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny 2021, dia nanao dia an-trano 697 tapitrisa ny sinoa ary nahatratra 560 miliara yuan ny fidiram-bolan'ny fizahan-tany, nitombo 136 isan-jato ary 150 isan-jato isan-taona, hoy ny CTA.
“Nahazo sitrana haingana ny fihinanana fizahan-tany any Shina. Hahitana fisondrotana fanjifana amin'ny telovolana fahatelo amin'ity taona ity, indrindra mandritra ny fetin'ny fetim-pirenena mandritra ny herinandro, "hoy i Dai.